काठमाडौं । नेपाली सेनाले विभिन्न ट्रेडका प्राविधिक पदिक तथा बिल्लदार पदहरुको लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ । सेनाको भर्ना छनौंट निर्देशनालय कार्यरथी विभागले एक मंगलबार एक विज्ञापन निकाल्दै दरखास्तका लागि आह्वान..
लोकसेवामा समावेशी समूहमा परेका आरक्षित कोटाभन्दा खुलाबाट धेरै सफल
काठमाडौँ । निजामती सेवामा समावेशी क्षेत्रका व्यक्तिले आरक्षित कोटाबाट भन्दा खुला र अन्य समूहबाट बढी सफलता प्राप्त गरेको पाइएको छ। लोकसेवा आयोगबाट लिइने परीक्षामा उनीहरुले आफ्नो आरक्षित कोटाभन्दा खुला र अन्य..
क्रिसमस र अंग्रेजी नयाँ वर्षको अबसरमा डान्सबारदेखि होटलहरुसम्मको छुटै छुट
काठमाडौँ । नजिकिएको अंग्रेजी नयाँ वर्ष (सन् २०१८) र ‘क्रिसमस डे’ लाई लक्षित गरेर यतिखेर पर्यटन व्यवसायीले नयाँ–नयाँ ‘प्याकेज’ सार्वजनिक गरेका छन् । पर्यटनका हिसाबले निकै महत्वपूर्ण मानिने यी पर्वमा आन्तरिक..
नेपाली सेनाले माग्यो १५० जना अधिकृत क्याडेट, प्लस टु पासले आवेदन दिन सकिने
काठमाडौं । नेपाली सेनाले आज १५० जना अधिकृत क्याडेट पदको लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ । नेपाली सेनाको स्वीकृत दरबन्दी भित्र रिक्त अधिकृत क्याडेट पदमा समावेशी तथा खुलातर्फ जम्मा १५०..
नवलपरासी । नवलपरासीको दुम्कौलीमा रहेको शाश्वतधाम नौ महिनाको अवधिमा १० लाख भक्तजनले अवलोकन गरेका छन् । पुस १ गते शनिवार बिहान ११ बजे मन्दिर प्रवेश गरेका सिराहाका १४ वर्षीय मनिश सामल..
सरकारी सेवाका लागि लोकसेवाले एकैपटक माग्यो ३९० शाखा अधिकृत
काठमाडौं । लोकसेवा आयोगले राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी अप्राविधिक (खुला एवम् समावेशी) शाखा अधिकृतको विभिन्न सेवाका लागि दरखास्त अह्वान गरेको छ । आयोगले बुधबार सूचना प्रकाशित गर्दै खुला तथा समावेशी गरेर..
इन्धनको मुल्य वृद्धिसँगै हवाई भाडा बढ्यो, अब कहाँ जान कति लाग्छ ?
काठमाडौं । मंगबारदेखि हवाई भाडा बढ्ने भएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेपछि हवाइ भाडा पनि बढाइएको हो । नेपाल आयल निगमले शुक्रबार आन्तरिक हवाई इन्धनमा ५ रुपैयाँ प्रति लिटर मुल्य..
बेलायतले माग्यो ५५०० नर्स, अझै ४० हजार नर्सको पद खाली
काठमाडौं । लामो समय यता नर्सको अभाव भएपछि बेलायतले ५ हजार ५ सय नर्स भित्र्याउने भएको छ । ‘अर्न, लर्न एन्ड रिटर्न’ स्किमअन्तर्गत ल्याउन लागिएका नर्स बढीमा तीन वर्ष काम गरेपछि..
Results 878: You are at page 17 of 30